Izipho eziphezulu zeBanggood-iveki kaSeptemba 24 ukuya ku-30, 2018 | I-Androidsis
UFrancisco Ruiz | | Izixhobo ze-Android
Sazi njani ukuba uyayithanda itekhnoloji ngexabiso elihle, enye yezona venkile zibalaseleyo zamaxabiso, umgangatho kunye nesiqinisekiso ngokungathandabuzekiyo yiBanggood, kwaye kungenxa yesizathu esifanayo ukuba ukusukela kule nyanga kaJulayi 2017 nokusukela ngoku inyanga nenyanga, siza kukuzisa eyona Banggood ibonelela ngokuhlaziywa ngeveki.
Ke inyanga nenyanga uya kuba nakho ukufumana elipapashiweyo kule posi Iinkonzo eziphezulu zeBanggood, eziza kuhlaziywa ngeveki ukubandakanya ezona zinto zinika umdla kwiveki enye esinokuyifumana kwivenkile ekwi-intanethi yemvelaphi yaseTshayina enamaxabiso ahlazo. Sifuna ukucebisa i khuphela kwaye ufake usetyenziso olusemthethweni lweBanggood ukusukela ngayo, ukongeza kufikelelo kwifayile ye- 10% isaphulelo esongezelelweyoUya kuba nokufikelela phambi kwakhe nawuphi na umntu ukuba unike izibonelelo ezizodwa kunye neekhowudi zokwazisa ngesaphulelo ezifumaneka kuphela nge-APP. Ungakulibali ke ukuba, ukuba ungumsebenzisi weTelegram, sinomjelo weendibano kunye nezibonelelo apho siquka ezona teknoloji zinika umdla esizibuthayo kwiivenkile ezahlukeneyo ze-Intanethi.
1 Izithembiso ezivela kwiveki kaSeptemba 24 ukuya ku-30
1.1 Izaphulelo kwizixhobo zeBlitzWolf
2 Izithembiso ezivela kwiveki kaSeptemba 17 ukuya ku-22
2.1 ILeEco Le2 X526 inexabiso kwi $ 99,99 kule veki
3 Izithembiso ezivela kwiveki kaSeptemba 3 ukuya ku-9
3.1 UMIDIGI Inye kuphela ye-146,16 euro
3.2 UMIDIGI Pro enye nge-euro ezili-171,95 kuphela
3.3 I-Elephone S7 ngesaphulelo sama-25% ngexabiso lama-euro angama-94,57
3.4 I-LEAGOO S9 nge-18% isaphulelo kwixabiso le-120,36 euro
3.5 I-DOOGEE MIX 2 ngesaphulelo se-33% ngexabiso le-171,95 euro
3.6 I-Nubia M2 Lite ngesaphulelo sama-31% ngexabiso lama-euro angama-91,13
Izithembiso ezivela kwiveki kaSeptemba 24 ukuya ku-30
Izaphulelo kwizixhobo zeBlitzWolf
Ingenye yeempawu ezaziwa kakhulu kwicandelo lezincedisi kunye nezihlanganisi zecandelo. Enkosi ku Banggood, sifumana uluhlu olubanzi lokunyusa kwiimveliso zabo. Iintambo ze-USB, iadaptha, iibhetri zangaphandle okanye iitshaja zezinye zeemveliso ukuba ifemi isishiya kwezi nyuselo. Ke ukuba ubukhangela enye, eli lelona xesha lilungileyo kuyo.
Ukunyuselwa zezona zahluka kakhulu. Izaphulelo ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-70, Iimveliso zasimahla zokuthengwa kwe2 okanye ngaphezulu iimveliso zeBlitzWolf okanye izaphulelo zokuthengwa kweemveliso ezininzi. Unyuselo olupheleleyo, olufumanekayo kule veki. Musa ukumsindisa.
Izithembiso ezivela kwiveki kaSeptemba 17 ukuya ku-22
ILeEco Le2 X526 inexabiso kwi $ 99,99 kule veki
Olunye uphawu olwaziwayo eAsia lusishiya ngemodeli yalo entsha ngexabiso elifanelekileyo. Inesikrini esizi-intshi ezi-5,5, kwaye ngaphakathi silindele iprosesa yeQualcomm Snapdragon 652, enye yezona zigqibeleleyo kuluhlu oluphakathi lwegama laseTshayina. Ine-3 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina kwangaphakathi. Ikhamera engasemva iyi-16 MP kwaye engaphambili iyi-8 MP. Sinesivamvo seminwe kwifowuni kwaye sime ngokutshaja ngokukhawuleza.
Ifowuni iyafumaneka konyuselo kwi-Banggood ngexabiso le-99 yeedola. Iyafumaneka ngeveki ngeli xabiso liphezulu.
Izithembiso ezivela kwiveki kaSeptemba 3 ukuya ku-9
UMIDIGI Inye kuphela ye-146,16 euro
Kule veki iphela, phakathi kokunikezelwa kweBanggood kufuneka sigqamise i-UMIDIGI One, itheminali enescreen se-intshi ye-5,99 ngesisombululo se-HD + kunye nomlinganiso we-19: 9. Ngaphakathi, sifumana ifayile ye- Iprosesa yeHelio P23 evela kwiMediaTek ihamba ne-4 GB ye-RAM kunye ne-32 GB yokugcina.
Ngokungafaniyo nezinye iitheminali zaseAsia, le modeli ifumaneka nge-Android 8.1, into ekunzima ukuyifumana ngamanye amaxesha phakathi kwezi ntlobo zabenzi. Ikhamera yangaphambili ifikelela kwi-16 mpx, ngelixa inkqubo yekhamera engasemva ineelensi ezili-12 mpx kunye neelensi ezi-5 ze-mpx, esinokuthi sithathe ngazo imizobo emihle.
UMIDIGI Pro enye nge-euro ezili-171,95 kuphela
I-UMIDIGI One Pro, imodeli ekwabonelelwa ixesha elilinganiselweyo, isinika izinto ezifanayo esinokuzifumana kwimodeli enye, ngescreen se-HD + se-5,99-intshi, i-Android 8.1, iprosesa yeMediaTek Helio P23 kunye I-4 GB ye-RAM. Umahluko ophambili, siyifumana kwindawo yokugcina, a isithuba esonyuka ukuya kuthi ga kwi-64 GB, endaweni ye-32 GB enikezelwa yimodeli enye. Zombini iimodeli ziyasivumela ukuba sandise indawo yokugcina ukuya kuthi ga kwi-256 GB sisebenzisa amakhadi e-MicroSD.
I-Elephone S7 ngesaphulelo sama-25% ngexabiso lama-euro angama-94,57
Siqala ezi zonikezelo ngenye yeemodeli ezibaluleke kakhulu zohlobo lwesiTshayina. Une Iscreen se-5,5-intshi kwaye isebenzisa iHelio X25 njengeprosesa. Ngokuphathelele kwi-RAM, ine-4 GB enye kwaye ine-64 GB yokugcina kwangaphakathi. Inekhamera enye eyi-13 MP ngasemva. Le modeli ime ngaphandle kokuba inzwa yeminwe edityanisiweyo ngaphambili.
I-Banggood isizisela le modeli kwi ixabiso le-94,57 euros kolu nyuselo. Ithatha a 25% isaphulelo Musa ukuwuvumela ukuba usinde!
I-LEAGOO S9 nge-18% isaphulelo kwixabiso le-120,36 euro
I-LEAGOO luphawu olwenza i-niche kwintengiso eYurophu, ngenxa yeemodeli ezinje. Ungumnini Isikrini se-5,85-intshi esine-HD epheleleyo + isisombululo, ngokungathandabuzekiyo intle kakhulu ukuba ukwazi ukubona zonke iintlobo zomxholo kuyo. Njengeprosesa bakhethe i-MTK6750, ihamba ne-4 GB ye-RAM kunye ne-32 GB yokugcina ngaphakathi. Ifowuni iphambili kuyilo lwayo, kunye nenotshi kwiscreen. Imodeli elungileyo, enoyilo olukhulu.
I-Banggood isizisela le modeli ngexabiso le- 120,36 euro kolu nyuselo. Kubandakanya isaphulelo se-18% ngaphezulu kwexabiso layo lokuqala.
I-DOOGEE MIX 2 ngesaphulelo se-33% ngexabiso le-171,95 euro
Olunye uphawu oluqhubela phambili kwintengiso yi-DOOGEE. Le fowuni inobungakanani bescreen se-intshi ye-5,99. Ine-Helio P25 njengeprosesa, ehamba ne-6 GB ye-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi kwe-64 GB. Le modeli ibonakala ibhetri enkulu ye-4.060 mAh, ngokuqinisekileyo ebonelela ngokuzimela okuninzi kubasebenzisi. Phakathi kweminye yemisebenzi yayo ebalaseleyo sifumana ukuvulwa ngokwaziwa kobuso kunye nekhamera engasemva kabini.
E-Banggood, sayifumana ifowuni kwi ixabiso le-171,95 euros kolu nyuselo. Kukhulu I-33% isaphulelo xa kuthelekiswa nexabiso layo lokuqala.
I-Nubia M2 Lite ngesaphulelo sama-31% ngexabiso lama-euro angama-91,13
I-Nubia M2 Lite ifana ngokufanayo, kodwa kuyo asizukufumana khamera iphindwe kabini yeNubia M2
INubia yenye yezo ntengiso zaziwa ngabantu abaninzi kwaye bezisoloko zithengisa ixesha elithile. Basishiya nokhetho olukhulu lweemodeli zazo zonke izigaba. Enye yeemodeli zayo yile M2 Lite. Ifowuni inesikrini esizi-intshi ezi-5,5. Njengeprosesa isebenzisa iMTK6750, ihamba ne-3 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina kwangaphakathi. Ikhamera engasemva iyi-16 MP kunye ne-13 MP yangaphambili, ukuze sikwazi ukuthatha imifanekiso emihle.
I-Banggood isizisela le modeli kwi ixabiso le-91,13 euros kolu nyuselo. Isaphulelo sama-31% xa kuthelekiswa nexabiso laso loqobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Izipho eziphezulu zeBanggood-iveki kaSeptemba 24 ukuya ku-30, 2018
Konke oku kuchaziwe kwiphepha lokuthengisa le-Banggood, ngesiqhelo ukuba iyathunyelwa eSpain kwaye ukuthunyelwa ngesiqhelo kuyacelwa, okuthatha inyanga yonke ukuze i-odolo yakho ifike, abakuhlawulisi iindleko zokuhambisa okanye iindleko zesiko kuninzi amatyala.
Ukuba uyayicela ngenkonzo ye-Express, ihlala iziswa yi-DHL kwaye ke ukuba awulahli iindleko zesiko. Umzekelo, ndacela iMi A1 ngokungxamisekileyo ukuba yenze uphononongo lwevidiyo ngokukhawuleza kwaye bandibiza imali emalunga neeyuro ezingama-35 ngeendleko zesiko.
I-90 yeedola ndiyifumana igqithile kwaye ayisiyiyo into ye-Banggood ukuba ayisiyiyo irhafu ilizwe lakho eliyibizayo.